हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा चितवन टाइगर्सले आफ्नो शतप्रतिशत नतिजालाई निरन्तरता दिएको छ।
आज भएको दोस्रो खेलमा पोखरालाई राइनोज लाई ९ विकेटले पराजित गर्दै चितवनले लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो।
पोखराले दिएको १२४ रनको मध्यम लक्ष्य चितवनले १६ दशमलव ४ ओभरमा एक विकेटको नोक्सानीमा १२४ रन बनाउँदै पुरा गरेको थियो।
चितवनको जितमा अफगानिस्तानका ब्याट्सम्यान अहमद शेजाद र भिम सार्कीले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए।
शेजादले ५२ बलमा ७ चौका र २ छक्का को मद्धतले नटआउट ६३ रन बनाए भने भिम सार्कीले ४२ बलमा ५ चौका र दुई छक्का प्रहार गर्दै ५४ रन बनाए। ओपनर ईशान पाण्डे भने डक आउट हुन पुगेका थिए।
ब्याटिङमा पनि निकै खराब प्रदर्शन गरेको पोखराका लागि बलरहरुले पनि कुनै कमाल देखाउन सकेनन्।पोखराका लागि सर्वाधिक विकेट लिने क्रममा विक्रम सोबले ३ ओभरमा १९ रन दिँदै एक विकेट लिन सफल भए भने अरु बलरहरु विकेट विहिन हुन पुगेका थिए।
पोखराको लागि पहिलो इनिङमा तल्लो क्रममा ब्याटिङ गर्न आएका विक्रम यादवको अर्धशतकीय पारीको मद्दतले राईनोजले ७ विकेटको नोक्सानीमा १२३ रन बनाएको थियो। उसका लागि दोस्रो सर्बाधिक रन असेला गुनरत्नेले २५ रन बनाए भने रिचार्ड लेभिले २० रन जोडे। अन्य खेलाडीले भने दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्।
५२ बलमा ६३ रन बनाएका चितवनका अहमद शेजाद खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए।
तीन खेल खेलेको चितवनले ३ खेलमै जित निकाल्दै ६ अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा बस्न सफल भएको छ। पोखरा एक जित, एक हार र एक अङ्क बाँडेर कुल ३ अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा बसेको छ।
Posted in एभेरेस्ट प्रिमियर लिग, क्रिकेट, खेल विवरणTagged #chitwan tigers #everest premier league 2021 #hamro nepal sports
साफ च्याम्पियनसिप २०२१: उद्घाटन खेलमा नेपालको ऐतिहासिक जित
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। आयोजक राष्ट्र माल्दिभ्सलाई उसकै घरेलू मैदानमा १-० ले पराजित गर्दै नेपालले विजयी यात्रा सुरु गरेको हो। झण्डै २२ वर्ष पछि माल्दिभ्स विरुद्ध जित निकालेको नेपालका लागि विजयी गोल मनिस डाँगीले गरेका थिए। खेलको ६९ओं […]
घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रसारणका लागि डिसहोम-क्यानको सम्झौता !!
दोस्रो खेलमा भारत पराजित, सिरिज बराबरीमा
उत्कृष्ट बलिङ्ग प्रदर्शन गरेको चेन्नाईद्वारा राजस्थान रोयल्स ४५ रनले पराजित !!
अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै बाहिरियो भारत
पहिलो टि-२० खेलमा भारतीय बलिङ्गको सामु श्रीलंका स्तब्ध !!